ရသဆောင်းပါးစုံ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 144
မင်းဂွတ်သီးနှင့် ကင်ဆာရာဂါအကြောင်း ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ်များ မြတ်ဆွေ(ဆန်ဖရန်စစ္စကို)၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆၊ ၂၀၁၄ (စောင့်ကြည့်သတင်းဂျာနယ်က ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြပါတယ်။ စာရေးသူ ဦးမြတ်ဆွေ၏ မိုးမခထံ ပေးပို့ထားတဲ့ မူလစာမူကို မြန်မာစာဖောင့် မပြောင်းနိုင်တဲ့အတွက် အချိန်နောက်ကျသွားတာ ခွင့်လွှတ်ပါ) ကျွန်တော့်ကျန်းမာရေးအတွက် Kaiser Insurance ရှိပါသည်။ ၂၀ဝ၈ ဒီဇင်ဘာလတွင် ပုံမှန်နှစ်စဉ် ကျန်းမာရေးဆေးစစ်ရာတွင် လက်ညှိုး ဖြင့် စမ်းသပ်ခြင်းပြုစဉ် (Rectal Examination) ဆရာဝန်က ဆီးကျိတ် ရောဂါ သံသယရှိသဖြင့် ဆီးပါရဂူသို့ လွှဲပြောင်းစမ်းသပ်စေခဲ့ပါသည်။ ဆီးပါရဂူက ထပ်မံစမ်းသပ်ပြီး ဆီးကျိတ်ကိုအသားစယူစစ်ဆေးခြင်း (Biopsy) လုပ်ရန် တိုက်တွန်းသည့်အတိုင်း လုပ်ဖြစ်၏။ အသားစ ၁၃ ချက်ယူရာတွင် တစ်ချက်တွင် (Adenocarcinoma) ကင်ဆာဆဲလ်တွေ့ ရှိရပြီး တခြား ၃...
အာဏာရှင်ရဲ့ ပုံတူ ဆောင်းလူ။ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅၊ ၂၀၁၄ ဒီကမ္ဘာမှာ အာဏာရှင်ကြီးလို့ လူသိများတဲ့ အဒေါ့ဖ် ဟစ်တလာရဲ့ ရေဆေးပန်းချီ … ကိုယ်တိုင်ရေး ပုံတူတခုပါ။ ပန်းချီကားပေါ်မှာပါတဲ့ အမှတ်အသားအရတော့ ၁၉၁၀ ခုနှစ်မှာ ရေးဆွဲပြီးခဲ့ပုံရပါတယ် …။ (ဒီပန်းချီပေါ်မှာတော့ မပါပါ)တကယ်လို့များ ဗီယဲန်းနား အနုပညာကျောင်းကသာ သူ့ရဲ့ ကျောင်းလျှောက်လွှာကို မပယ်ချခဲ့ဘူးဆိုရင် …။ ငြင်းပယ်ခံလိုက်ရပြီးတဲ့နောက်တော့ စစ်သားဖြစ်သွားတာပါပဲ …။ နောက်တော့ အများသိကြတဲ့အတိုင်း … ပန်းချီဆွဲတာမှာတောင် .. ပန်းတွေ (အထူးသဖြင့်တော့ နှင်းဆီတွေ)၊ လွမ်းဆွေးဆွေး ရှုမျှော်ခင်းတွေကို ဆွဲရတာမှာ ၀ါသနာထုံတယ် ဆိုပါတယ် ..။ ဒါ့ကြောင့်လည်း သူ့ကိုယ်တိုင်ရေး ပုံတူဟာ ပန်းချီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ …။ ဒီပန်းချီကားကိုလည်း ၁၉၄၅ ခုနှစ်၊...
အရှင်ဇ၀န (နုိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅၊ ၂၀၁၄ အမည်းရောင်ထဲမှ အဖြူတစက်ဟာ ပိုထင်ရှား ပေလိမ့်မည် ။ ကန္တာရ ထဲမှ ရေကြည်တခွက် သည်လည်း အဖိုးတန်ရတနာတခုဟု ယူရ မည်ဖြစ်သည် ။ ဆဲသံ ဆိုသံတို့ဖြင့် အနိုင်ကျင့် ဗိုလ်ကျသူတို့နေရာ။ လူသားတို့အတွက် သောက နှင့် အပူ ဖန်တီးနေရခြင်းကို တာဝန်တခုလို ကျေနပ် နေကြသော လူတွေ ကြားမှ တွေ့မြင်လိုက်ရသော လူသားဆန်မှုက နေပူထဲ ချွေးဒီးဒီးကျနေသူကို ရေအေးအေးတခွက် လာကမ်းပေးတာပင်ဖြစ်သည် ။ သူ့ကိုစတင် သိရှိသည်မှာ သာယာဝတီထောင်သို့ ရောက်ပြီး ရက်ပိုင်းမှာပင် ။ ထိုနေ့က ထောင်ပိုင်တန်းစီ လှည့်သောနေ့ဖြစ်သည်။ ရောက်ပြီးမကြာသေးသောရက်အတွင်းဆိုတော့ ထောင်ပိုင်းကလည်း မျက်နှာထား တင်းတင်း ၊အသံမာမာ။...
ထိုမြို့ကလေးကို မေ့နေခဲ့သော အပြေးသမား … ဆောင်းလူ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅၊ ၂၀၁၄ ထိုမြို့ကလေးသည် … ခုတော့ … တမာတွေ ဝေလို့ အဖူးအညွှန့်တွေတောင် ဥနေပါရော့။ ထိုမြို့ကလေးနှင့်အတူ … ဤအချိန် တမာစိမ် ချဉ်ချဉ်ခါးခါးကို မေ့လိုက်သည့် ဖြစ်ခြင်း ..။ တမာနဲ့တွဲလို့ ကိုင်းထွက် … မြေပုံသီး ငါးပိချက်ကို ပိုမေ့လိုက်သည့် ဖြစ်ခြင်း။ မျှင်ငါးပိစိမ်းစားခပ်၊ မိုးမျှော်ငရုတ် ရောယှက်ထားပြီး မြေအိုးနှင့်ချက်သည့် ငါးပိချက်နှင့်အတူ ထိုမြို့ကလေးကို မေ့မိလိုက်သည့် ဖြစ်ခြင်း …။ မေ့ခြင်းတရားတို့သည် … ပို၍ ပို၍ … ပို၍ ပို၍နှင့်အတူ ထိုမေ့ခြင်းတရားတို့သည် … ထို့ထက် ပို၍ ပို၍ … ...
ဖုိုးထက် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄၊ ၂၀၁၄ ကွယ်လွန်သူ နိုင်ငံကျော် အဆိုတော် ကိုထူးအိမ်သင် လက်မှတ်ထိုးရင် သူ့လက်မှတ်အပေါ်မှာ “ချစ်ခြင်းအားဖြင့်” လို့ အမြဲလိုလို တွေ့ရတတ်တယ်။ ငယ်တုံးကတော့ ဒီဘဲကြီး ခေတ်လုပ်တယ်၊ သူ့ကိုယ်ပိုင် ဟန်တစ်ခု ယူတယ်လို့ ထင်တာ။ နောင်မှ ချစ်ခြင်အားဖြင့် ဘ၀ကို ဖြတ်သန်းသွားတဲ့ သူ့ကို အားကျရကောင်းမှန်းသိလာတာ။ ချစ်ခြင်းအားဖြင့်…ဘာကို ချစ်ရမှာလဲ။ ပြောတော့သာ လွယ်တာပါလေ။ ကိုယ့်အပေါ် တလွဲတွေ၊ တန်ဖိုးမထားတာတွေ၊ လေးလေးနက်နက် မရှိတာတွေ ကို ချစ်နိုင်ပါ့မလား။ ကိုယ့်အပေါ် အလကား သက်သက် မုန်းနေကြသူတွေ၊ မနာလိုကြသူတွေ၊ ခြေထိုးကြသူတွေကို ချစ်နိုင်ပါ့မလား။ ကျွန်တော်ကတော့ လုံးဝဘဲလို့ ရိုးရိုးသားသားဝန်ခံစမ်းပါရစေ။ ကိုယ့်အပေါ် မကောင်းလဲ ကိုယ်က ပြန်ကောင်းရမယ်...
အလယ်ခေတ်ရှန်ပိန်နယ်ရဲ့ရှေးမြို့ဟောင်း (Provins)၊ ပါရီ နေ့ချင်းပြန် ခရီးစဉ် အမှတ် (၁) မောင်ရင်ငတေ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄၊ ၂၀၁၄ ရှန်ပိန်နယ်သို့သွားရာ ကျေးလက်လမ်း (ဓါတ်ပုံ မရငတ) ဥရောပရဲ့အလယ်ခေတ် ၁၁ ရာစု နောက်ပိုင်းကာလက တည်ရှိခဲ့တဲ့ Provins ဆိုတဲ့ရှေးမြို့ဟောင်း ရှိရာကို ပြီးခဲ့တဲ့ အားလပ်ရက်တရက်က မောင်ရင်ငတေ သွားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်၊ ပါရီမြို့ရဲ့ အရှေ့ဘက် ကီလိုမီတာ ၈၀ နီးပါးမှာ ရှိတဲ့ Provins မြို့ဟာ အရင်ခေတ်တွေတုန်းကတော့ နာမည်ကျော် ရှန်ပိန် ထွက်ရှိရာ ပြည်နယ်ထဲမှာ ပါဝင်ခဲ့ပြီး ခုအခါမှာတော့ Île-de-France လို့ခေါ်တဲ့ တိုးချဲ့ပါရီမြို့တော် မက်ထရိုပိုလီတန် ဧရိယာ ဇုံ ၅ ရဲ့ အရှေ့အစွန်ဆုံးဒေသမှာ တည်ရှိပါတယ်၊ သာယာလှပအေးချမ်း ငြိမ်ချမ်းတယ်လို့တော့...
အရှင်ဇ၀န (နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃၊ ၂၀၁၄ ဘဝ၏အဓိပ္ပါယ်ကို အမျိုးမျိုးဖွင့်ဆိုကြသည်။ ထိုဖွင့်ဆိုချက်တို့သည် ဖွင့်ဆိုသူတို့၏ ကိုယ်တိုင်ဖြတ်သန်းရသော အခြေနေတို့မှ ပေါက်ဖွားလာသည်ဟု မြင်မိသည်။ လူတို့သည် အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံ ဖြတ်ကျော်ခဲ့ကြရသည်။ တယောက်နှင့် တယောက် တထပ် တည်း မကျကြ။ ဒီတော့ အမြင်ကလည်း တယောက်တမျိုးစီဖြစ်လာကြတော့မည်။ အခုအတူတူတခန်းတည်းနေသူတို့ သည်ပင်လျှင် လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရသော အနေထားပေါ်တွင် ပြန်လည်တုန့်ပြန်ပုံခြင်း ကွာခြားလှသည်။ ဒီတော့ တိုက်၂ခုအတွင်းနေထိုင်သူတို့ကို ဆန်းစစ်မိသည်။ အတူတူထောင်ပြောင်းလာသူတွေထဲ အမှုမျိုးစုံ ပါလာကြသည်။ ၅(ည) နိုင်ငံရေးနှင့်ပတ်သက်တာ ဆို၍လက်ချိုးရေလို့ရသည်။ (၁၁)ခန်းမှာ ကိုဌေးကြွယ် ရှိသည်။ (၁၀)ခန်းမှာ မန္တလေးကအမတ် ဦးတင်အောင်အောင် ။ (၈)ခန်းမှာ ဒေါက်တာထွန်းသူ။ (၅)ခန်းမှာ ပခုက္ကူက ဦးပိုက်ကို ။(...
မောင်မောင်လတ် (ရွှေအင်းလေး စာပေ) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃၊ ၂၀၁၄ ညတည ခေတ်တခေတ်ရယ်လုို့သတ်မှတ်လုို့ရမယ်ဆိုရင်တော့ … …. ဒီညတည… အမှောင်မိုက်ဆုံး ညတည …၊ စိုးရီမ်ထိတ်လန့်ခဲ့ရ တဲ့ည. …၊ ဆာလောင်ငတ်မွှတ်ခဲ့ရတဲ့ည…..၊ ပူဆွေး ဝမ်းနည်းခဲ့ရတဲ့ ည….. ၊ အမိုးအကာမဲ့ အမှောင်ထုထဲ ကျီးလန့်စာ စားခဲ့ရတဲ့ည….၊ အတွင်းစိတ်ကော ကိုယ်ပါ နာကျင်မှုတွေ တငွေ့ ငွေ့  တောက်လောင်နေခဲ့ရတဲ့ ည…..၊ နိုင်ထက်စီးနင်း ခြိမ်းခြောက်မှုတွေ အသံတိတ် ငိုကြွေးခဲ့ရတဲ့ ည….၊ ကြယ်တွေ မစုံခဲ့ရတဲ့ ညပေါင်းများစွာ…၊ လမိုက်ခဲ့ရတဲ့ ညပေါင်းများစွာ…ဖြတ်ကျော်ပြီးသကာလ……..၊၊ ဒီတညအကုန်…………၊ ပေါ်ထွက်လာတဲ့အလင်းရောင်ဟာ ရောင်နီဦး စိတ်ကူးယဉ်စရာ လှပတဲ့အလင်းရောင်မဟုတ်……၊ မျှော်လင့်ချက် တပုံတပင်နဲ့ ထွက်ပေါ်...
မောင်ဖေသက်နီ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂၊ ၂၀၁၄ Stratford-upon-Avon, Shakespeare (Chris Cole/Getty) (၂၀၁၄ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၈ ရက်နေ့ဘီဘီစီ လေ့လာရေးခရီးစဉ် ၀က်ဆိုဒ် BBC Travel ရဲ့ ဆောင်းပါးကဏ္ဍမှ http://www.bbc.com/travel/feature/20140218-following-in-the-bards-footsteps-literally – မတ် ဘိုလ်တန် Matt Bolton ရေးသားပြီး မောင်ဖေသက်နီ ဘာသာပြန်ပါတယ်။) စာပေတွေ ဖန်တီးရေးသားခြင်းတွေမလုပ်တဲ့အချိန်တွေမှာ ဗြိတိသျှ စာရေးဆရာကြီး၊ ပြဇာတ်ဆရာကြီးနဲ့ကဗျာဆရာကြီး ၀ီလျံ ရှိတ်စပီးယား William Shakespeare ဟာ လမ်းလျှောက်တာကို လုပ်လေ့လုပ်ထရှိပါတယ်။ ပုံမှန်အရဆိုရင် သူနေထိုင်ရာ “စထရတ်ဖို့ အပ်ပေါ်န်အေဗွန် Stratford-Upon-Avon”ကနေ လန်ဒန်မြို့ တောင်ပိုင်းက ပြဇာတ်ရုံတွေရှိတဲ့ လန်ဒန်မြို့ တောင်ပိုင်းကို လမ်းလျှောက်လေ့ရှိ ပါတယ်။ သူရေးစပ်...
သန်းဝင်းလှိုင် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂၊ ၂၀၁၄ သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ အစိုးရအဖွဲ့သည် ၂ဝ၁၄ ဖေဖော်ဝါရီလဆိုလျှင် အစိုးရသက်တမ်း သုံးနှစ်ကျော်လာ ခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်သည် အစိုးရသက်တမ်းတလျှောက်တွင် တဒင်္ဂ အားတက် ၀မ်းမြောက်ဖွယ် ပျားရည်နှင့် ဝမ်းချသည့် ကတိစကားများစွာ ပြောကြားခဲ့သော်လည်း ယနေ့တိုင် ဘာတစ်ခုမှ မတည်ခဲ့ပေ။ ပြီးခဲ့သော ၂ဝ၁၃ သြဂုတ်လ ၁၃ ရက်နေ့က နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး၌ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ပြည်ထောင်စုအဆင့် ဒုဝန်ကြီးများ ကတိသစ္စာ ခံယူခြင်းနှင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ မိန့်ခွန်းနာခံခြင်း အခမ်းအနားတွင် သမ္မတဦးသိန်းစိန်က အစိုးရတစ်ဖွဲ့လုံး၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး၊ ကိုယ်ကျင့်တရား၊ အကျင့်စာရိတ္တနှင့် အဂတိတရားများ ကင်းရှင်းအောင် စောင့်ထိန်းသွားရန်နှင့် ပြည်သူများ တိုက်ရိုက်ခံစားလိုသော ရေကောင်းရေသန့် ရရှိရေး၊...
Page 144 of 179«1...142143144145146...179»